Khabiirka Kala Duwan: WebHarvest, 5 Faa'iidooyinka Aasaasiga ah ee Ganacsigaaga
Xogta la xareeyey waxay ganacsatada u saamixi doontaa go'aanno caqli-gal ah oo muhiim u ah guusha. Si kastaba ha noqotee, badiba suuqa kala iibsiga iyo maamulayaashu waxay iska ilaaliyaan isticmaalka shabakadaha caadiga ah ee websaydkooda sababtoo ah shaqadoodu xaddidan tahay iyo muuqaalada. Si ka duwan sida qalabkaas, WebHarvest waa adeeg ka saarista xogta la isku hallayn karo. Waxay u saamaxdaa ganacsatada in ay ururiyaan oo ay falanqeeyaan xogta, iyo inay wax ka qabtaan hawlo aad u adag. Adeeggani wuxuu adeegsanayaa farsamooyinka qoraalka iyo farsamooyinka HTML-ka iyo wuxuu ka dhigayaa macluumaadka laga helo bogaga internetka ah. Faa'iidooyinka waaweyn ee hoos ku qoran:
1. Ururinta macluumaadka ku saabsan tartamayaashaada:
Iyadoo WebHarvest ay si fudud u uruurin karto macluumaadka ku saabsan tartameedyada, badeecadahooda, adeegyada, xeeladaha suuq-galka, suuqyada soo socda iyo isbeddellada ugu dambeeyay. Marka la soo gaabiyo, waxaad baraneysaa wax walba oo ku saabsan isbahaysigaaga isla markaana samayn kara go'aano caqli-gal ah si aad u kobciso ganacsigaaga. Internetku wuxuu ka kooban yahay macluumaad, waxaana jira tiro badan oo tartan ah oo ku tartamaya. WebHarvest waxay kuu fududeyneysaa inaad ururiso oo aad abaabusho xog ku saabsan tartamadaada muhiimka ah.
2. Tiknoolojiga barashada mashiinka:
WebHarvest waxaa ugu wanaagsan ee loo yaqaano tiknoolajiyada barashada mashiinka iyo xogta xoqidda foomka habaysan. Waa inaad soo bandhigtaa xogta ama gelisaa URL aad rabto inaad xoqato, WebHarvest wuxuu bilaabi doonaa inuu shaqadiisa kiciyo oo uu ku siiyo macluumaad wax lagu akhrisan karo oo la qaadi karo oo ah daqiiqado.
3. Dhammaan natiijooyinka degdega ah oo lagu kalsoonaan karo:
Ganacsi, waa muhiim in la ururiyo oo laga saaro macluumaadka wakhti gaaban. Mararka qaarkood isaga / iyadu waa inay la kulmaan waqtiyada kama dambaysta ah waxayna ku lug leeyihiin caqabado badan. Xaaladdan oo kale, waxaad isticmaali kartaa WebHarvest-ka oo aad shaqadaada ku qabato. Mid ka mid ah sifooyinka ugu kala duwan ee qalabkani wuxuu yahay in uu ku ururiyo xogtaada dhowr ilbiriqsi wuxuuna ku qaban karaa ilaa 1200 shaqo waqti. Si kale haddii loo dhigo, waxaad xoqin kartaa bogagga intarneedka ah ee aad rabto oo aad ku dhammeysato hawlahaaga saacado yar, inaad la kulanto waqtiyada laguu qabtay si fudud. Intaa waxa dheer, natiijooyinka qalabkani waa mid sax ah oo lagu kalsoon yahay. WebHarvest waxay hagaajineysaa dhammaan qaladaadka yar yar iyo kuwa waaweyn si toos ah waxayna ku siiyaan macluumaad khalad ah oo la akhrin karo.
4. Bartilmaameedyada shabakada wax iibsiga:
Haddii aad hadda bilowday bogga wax iibsiga oo aad rabto in aad ka qaadatid macluumaadka Amazon iyo eBay, waa inaad doorataa WebHarvest. Adeeggan, waxaad si sahlan u heli kartaa macluumaad ku saabsan kumanaan alaab, sharaxaadooda, sawirrada iyo xitaa macaamiisha dib u eegista. Dhammaan macluumaadkaan waa la tuurayaa isla markaaba waxaad awoodi doontaa inaad ku hesho qaabka miisaska iyo liisaska. Xeerarka xogta saxda ah ee adduunka iyo WebHarvest waxay ballanqaadaan natiijooyin la isku haleyn karo oo sax ah, kaa caawinaya inaad ku koranto ganacsigaaga wakhti gaaban.
ganacsade waa inuu maamulaa tiro badan oo hawlo ah waana inuu awoodaa inuu xareeyo culeyska bogagga shabakadda daqiiqad. Isaga / iyada waxay ahaan lahayd inay xog ururiso dukaamada internetka iyo goobaha warbaahinta bulshada. WebHarvest waxay leedahay tiknoolaji heer sare ah si ay shaqadaada u fududeyso. Waxaad isticmaali kartaa qalabkan natiijooyin wax ku ool ah waxayna xoqin kartaa bogagga internetka ee tiro badan. Waxaa kale oo aad diirada saari kartaa macluumaadka juquraafi ahaan iyo shaxda leh ee adeeggan adigoo adeegsanaya qaabkan la adeegsan karo Source .